Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dhaawacyadii Virgil Van Dijk & Thiago Alcantara – Akhriso Tallaabada Ay Maanta Qaadday Liverpool – Laacibnet.net
Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dhaawacyadii Virgil Van Dijk & Thiago Alcantara – Akhriso Tallaabada Ay Maanta Qaadday Liverpool
Liverpool ayaa wali la murugaysan dhaawaca halista ahaa ee shalay soo gaadhay difaaceeda Virgil van Dijk oo garoonka laga saaray daqiiqaddii 11aad ee kulankii Merseyside derby ee 2-2 ay ku kala baxeen Everton iyo Liveprool.
Difaaca reer Netherlands oo uu goolhaye Pickford taako xun kaga qabtay jilibka lugta midig oo ciiray ayaa waxay Liverpool xalayba ula carartay cusbitaalka oo laga qaaday sawirro iyo baadhitaano hordhac ah oo lagu ogaanayo inta uu le’eg yahay khasaaraha soo gaadhay.
Warar xalayba warbaahintu heshay ayaa sheegay in uu dhaawaca Van Dijk culus yahay oo ay suurtogal tahay inuu garoomada ka maqnaado muddo toddoba illaa siddeed bilood ah, taas oo haddii ay dhacdo ka dhigan inaanu xili ciyaareedkan kusoo laaban doonin.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la sheegay inay saaka u direen Van Dijk khabiir takhasus ku ah dhaawacyada jilbaha, si ay xog rasmi ah u helaan ka hor inta aanay shaacin waqtiga uu garoomada ka maqnaan doono.
Sida uu qoreen wargeysyada kasoo baxa magaalada Liverpool, laacibkan ayaa cusbitaalka la geeyey, waxaana sawirradii laga qaaday la tusayaa dhakhtar khaas ah oo ku takhasusay halka ay laacibkan wax ka gaadheen, kaas oo marka uu daraaseeyo bixin doona talooyinka iyo qaabka daaweyntiisa loo samayn doono.
Warku wuxuu intaa ku daray in dhakhtartarkani uu maanta oo Axad ah jawaabta siin doono Liverpool, kaddibna ay isla eegi doonaan sida ugu habboon ee loo dhayi karayo dhaawacan, isla markaana loo samayn karo xataa haddii loo baahdo qalliin.
Liverpool ayaa rajaynaysa in xaaladda Van Dijk aanay gaadhin heer qalliin, balse haddana ma doonayaan inay kusoo dedejiyaan inuu garoomada kusoo laabto iyadoo aan daaweynta ugu habboon iyo waqtiga ugu fiican ee uu kusoo kaban karayo aan soo qaadan.
Dhinaca kale, Thiago Alcantara oo isagana xalay la geeyey cusbitaalka ayaa la sheegay in aanay xaaladdiisu xumayn oo ay jug kali ahi kasoo gaadhay taakadii uu Richarlison ku qabtay dhamaadkii ciyaarta.
Laacibka reer Spain ayuu warku sheegay in Liverpool aanay u dirin dhakhtar takhasus ah laakiin ay xaaladdiisa gacanta ku hayaan dhakhaatiirta kooxdu oo ay siinayaan waqti uu jidhkiisu isku ururi karo ka hor inta aanay isagana go’aankiisa warbaahinta la wadaagin.